Diyaarad qaxooti Soomaali waday ayaa ka dejisay Magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Wararka laga helaayo Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegaya in Garoonka Diyaaradaha Magaaladaasi ay ka degtay Diyaarad siday dad Somaliyed oo dalka Kenya Qaxooti ku ahaa, balse hada go’aansaday inay dalkooda hooyo ku soo laabtaan.
Diyaaradan waxa ay siday dad gaaraya 61 ruux sida ay inoo xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland, waxaana la sugayaa diyaarad kale oo ay saaran yihiin dad kale.
Xerada Qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya ayeey ka soo duushay Diyaaradan, dadka soo raacay waxa ay isugu jiraan, haween caruur iyo dad da’ ah.
Dib u soo celinta muwaadiniintaan Somaliyed ee mudada fog Qaxootiga ku ahaa dalka Kenya ayaa waxaa iska kaashanaya Dowladda Federalka Somaliya iyo Qaramada Midoobay, gaar ahaan Hay’ada u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa ku sugan Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo oo sugaya diyaarada kale ee sida Dadka Qaxootiga ah ee dalkooda dib ugu soo noqonaya.
Xeryaha Dhadhaab ee Kenya waxaa Qaxooti ku ah Soomaali aad u badan, iyadoo dhinaca kale uu jiro Heshiis Seddax geesood ah kaa oo dhex maray Dowladda Federaalka, Kenya iyo Qaramada kaasi oo qeexaya in dadka doonaya dalkooda inay ku soo noqdaan loo fududeeyo.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya iyo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, ayaa dhawaan waxa ay tageen Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab halkaasi oo dadka Somalida ee ku jira ay ku guubaabiyeen inay dalkooda dib ugu noqdaan.